Orbital zokushisela Machine, zokushisela Umsebenzi-Station, CNC Cutting Machine - AEON
Sinikeza uhla oluphelele lwemikhiqizo ye-orbital welding, kufaka phakathi ithubhu lekamelo elivaliwe kanye ne-tube weld head, ishubhu lokushisa lokushisa kushubhu lekhanda le-weld ikhanda nohlobo oluvulekile lwamakhanda wokushisela amapayipi wezimboni, futhi nesilawuli se-welding esihleliwe.
Sinikezela ngezikhala zokushisela ezizenzakalelayo ezijwayelekile, ikakhulukazi kufaka phakathi uhlelo lokushisela i-hydraulic tube tube, isiteshi sokushisela i-pipe flange, uhlelo lwe-plasma longitudinal & circumferential welding system kanye nohlelo olude lwe-welding welding.
Ijubane eliphakeme, ukunemba okuphezulu kwe-CNC Plasma Cutting Machine, ngokwakhiwa kwe-compact modular ukufakwa okulula nokusheshayo. Itafula lokuzikhethela intuthu nomqoqi liqinisekisa ukuhlangabezana nezindinganiso zokuvikelwa kwemvelo.
Sinikezela ngawo wonke amathuluzi angahle adingeke kumalungiselelo we-welding, kufaka phakathi abasiki bepayipi, imishini ye-tube squaring, imishini ye-pipe beveling, i-tungsten electrode grinders, imishini yokugoqa i-wire spool, njll.
NJENGOBA / RS
Sinikeza izingxenye eziyinhloko ohlelweni lokugcina impahla oluhlakaniphile lwe-AS / RS, kufaka phakathi amamodeli ahlukahlukene we-stacker crane, amafoloko we-telescopic, imishini yokuhambisa, i-AGV / RGV, ukuphindisela ngamakheshi kanye nesoftware ye-WMS.
Ukukhiqizwa Kobuchwepheshe be-R & D +
Ukudala Inani Lamakhasimende
I-AEONHarvest Group itholakala esikhungweni sezezimali emhlabeni seHarbour City, eHong Kong. Le nkampani izinikele kakhulu ekungeniseni nasekuthumeleni izinsiza kusebenza zezinto zokusebenza zezimboni futhi inikeza ukuqeqeshwa kwezobuchwepheshe nezinsizakalo zangemva kokuthengisa. Sithatha ukukhiqizwa kwekhwalithi njengesisekelo sokumaketha komkhiqizo. I-AEON Harvest International (HK) manje igxile ekunikezeni ukubambisana okukhethekile nomakhi waseChina u-HUAHENG Group insizakalo ekhethekile ye-ejensi yokukhuthaza umkhiqizo nokuthengisa ezimakethe zomhlaba wonke ……
Ukwazi kabanzi ngathi
Shiya umyalezo kithi, sizobuyela kuwe kungekudala ngayo yonke imizamo.